လာပြန်ပြီ နောက်တစ်မျိုး – ကြားဖြတ်အစိုးရတဲ့ – ခက်တော့ခက်ရချည့် - Yangon Nation News
လာပြန်ပြီ နောက်တစ်မျိုး – ကြားဖြတ်အစိုးရတဲ့ – ခက်တော့ခက်ရချည့်
လာပြန်ပြီ နောက်တစ်မျိုး –
ကြားဖြတ်အစိုးရတဲ့ – ခက်တော့ခက်ရချည့်
ပုဒ်မ(၃၉၈) နှင့်အညီ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ အပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်အနည်းဆုံး ငါးဦးကိုခန့်အပ်တာဝန်ပေးနိုင်ခွင့်နဲ့အညီ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်၊
သို့ကြောင့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဆောင်ရွက်နိုင်မူများသည် ဖွဲ့စည်းပုံ၏ စိုးမိုးသက်ရောက်မူရှိပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၃၉၉) တွင် ပုဒ်မခွဲ(က)မှ (ဇ) အထိပုဒ်မခွဲ(၈)ခုဖြင့် ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပါတယ်၊
(င) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်သော်လည်းကောင်း၊နယ်မြေလုံခြုံရေးအခြေအနေအရသော်လည်းကောင်း၊လွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသည့်မဲဆန္ဒနယ်များ၏ ရွေးကောက်ပွဲများကိုရွှေ့ဆိုင်းခြင်း၊
(စ)ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီလည်းကောင်း၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ညွှန်ကြားချက် စသည်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီလည်းကောင်း ထုတ် ပြန်ခြင်း၊
(ဇ) ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကိုထမ်းဆောင်ခြင်း၊
ပုဒ်မ(၄၀၄) နိုင်ငံရေးပါတီတစ်တစ်ရပ်သည် –
ကော်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီဲပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်လွှတ်တော်များရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ အခန်း(၁၁) မှာ ပုဒ်မ(၅၀) မှ (၅၄) အထိ အသီးသီးပြဌာန်းထားပါတယ်။
ပုဒ်မ(၅၀) ကော်မရှင်သည် –
(က) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သော မဲဆန္ဒနယ်များတွင် ယင်းဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းပြီးသည်အထိ ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
(ဂ) လွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်တစ်နယ်တွင် ပါဝင်သော အချို့ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲများ ကျင်းပရန် အခြေအနေရှိပြီး အချို့ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အခြေအနေမရှိလျှင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်အခြေအနေရှိသော ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်သော်လည်းကောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် အခြေအနေမရှိသော ဒေသများ၌ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခြင်း မပြု ရန်သော်လည်းကောင်း၊မဲရုံများကို လုံခြုံမူရှိသောနေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ကျင်းပရန်သော်လည်းကောင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်၊
ထမြောက်သော ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်သည်၊
လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသောရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် မဖြစ်နိုင်ဟု “ကော်မရှင်က” ယူဆလျှင် ယင်းမဲဆန္ဒနယ် တစ်နယ်လုံး၏ ရွေးကောက်ပွဲကို ရွှေ့ဆိုင်းနိုင်သည်။
ပုဒ်မ(၅၄) ကော်မရှင်သည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
အထက်ပါ ကော်မရှင်နှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံက သတ်မှတ်ပေးထားသော ဥပဒေများကိုရေးသားတင်ပြရခြင်းမှာ –
မြန်မာနိုင်ငံ၏ (၂၀၂၀) နိုဝင်ဘာလ(၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ပါဝင်ရွေးချယ် ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း (၉၀) ကျော်ရှိရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများကို တွေ့ဆုံပေးရန် တောင်းဆိုသောပါတီ သုံးပါတီ ရှိပြီး အိတ်ဖွင့်စာပေးပို့သောပါတီက တစ်ခုရှိနေတာကို အကြမ်းဖျဉ်းတွေ့ရပါတယ်။ပါတီတစ်ချို့ကတော့ မီဒီယာမှာ ပြောဆိုနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။
ဤသည်မှာ သက်ဆိုင်သူများ၊နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ လွတ်လပ်စွာ ပြောရေး ဆိုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်၊
မြေပြင်အခြေအနေ ဖြစ်စဉ်များကို အမြဲမပြတ် စောင့်ပြီး လက်တွေ့ကြမည့် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်ကို ဆုံးဖြတ် အကောင်အထည်ဖော်ရမှာသည် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ ဥပဒေအရ ပေးအပ်တာဝန်ပင်ဖြစ်ပေသည်၊
သို့ပေမယ်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခု၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးမှ ပြောဆိုမူသည် နိုင်ငံတော်အား မတည်မငြိမ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီး၊
နိုင်ငံတ်ာအစိုးရကိုဖြစ်စေ၊နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝတ်ရေးကိုဖြစ်စေ၊ ထိခိုက်သည့်ပြစ်မူကို တစ်ဦးတစ်ယောက်က ကျုးလွန်ချင်လာအောင်အများပြည်သူကိုသော်၎င်း၊အများပြည်သူ၏ သီးခြားလူစုကိုသော်၎င်း၊ကြောက်ခြင်း၊ထိန့်လန့်ခြင်း၊ တစ်ခုခုဖြစ်စေရန် အကြံရှိလျှင်၊
တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် ပြစ်မူကျုးလွန်အောင် လှူံ့ဆော်ရန်အကြံရှိလျှင်၊ သို့တည်းမဟုတ် အဆိုပါ လှူံ့ဆော်ခြင်းကို ဖြစ်တန်ရာသည့် အကြောင်းရှိလျှင်၊
ရာဇဝတ်မူမကင်းသော ချောက်လန့်မူ ဖြစ်ပါတယ်၊
ပုဒ်မ(၅၀၅)(ခ) နှင့် (၅၀၅)(ဂ) ကိုကျုးလွန်ရာရောက်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအရ မတည်မငြိမ်လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူး၊ အဓိက ဘာကို ဆိုလိုချင်တာလဲဆို
(၂၀၂၁) ဇန်နဝါရီလကုန်ဆို သက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်၊ ကုန်ဆုံးရင် တတိယလွတ်တော်ခေါ်ရပါတော့မယ်၊
ထိုစကားသည် ပုဒ်မ(၅၀၅)(ခ)(ဂ) နဲ့ မငြိစွမ်းနိုင်ဘူးလား၊
တည်ဆဲဖွဲ့စည်းပုံမှာ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ နဲ့ သက်ဆိုင်သည့်အခြေအနေ တစ်ရပ်တွင် ကြားဖြတ်အစိုးရဖွဲ့ရမည်ဟူသော ပြဌာန်းထားချက်လုံးဝ(လုံးဝ) မရှိပါပေ။
အကယ်၍ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ရွေးကောက်ပွဲကို ရွေ့ဆိုင်းနိုင်မူကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ(၃၉၉)ပုဒ်မခွဲ(င) မှာ တိတိကျကျ ပြဌာန်းထားသည့်အပြင်၊
ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များမှာလည်း ဥပဒေ ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အခန်း(၁၁) ပါ –
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများအား သွားချိတ်ဆက် လို့မရပါ ဆိုသည်ကိုလည်း ပြည်သူအများသိစေအပ်ပါတယ်။
လွတ်တော်များ၏ သက်တမ်းနှင့် လွတ်တော်အသီးသီးမှ ဥက္ကဌများ၊ဒုတိယဥက္ကဌတို့၏တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ခွင့်များအား –
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၁၁၉)(၁၅၁)(၁၆၈) နှင့်
(၁၁၃)(၁၄၅)(၁၆၅) တို့တွင် ပြဌာန်းထားပါတယ်။
ပုဒ်မ(၆၁)(က) နိုင်ငံတော်သမ္မတ သို့မဟုတ် ဒုတိယသမ္မတတို့၏ရာထူးသက်တမ်းသည် ငါးနှစ်ဖြစ်သည်။
(ခ) ယင်းရာထူးသက်တမ်း ကုန်ဆုံးသည်ံအခါ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီးသည့်အချိန်အထိ နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒုတိယသမ္မတများသည် “မိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ” ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရမည်။
ပုဒ်မ(၂၃၅)(က) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်ဒုတိယဝန်ကြီးတို့၏ ရာထူးသက်တမ်းသည်
“သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပုဒ်မ(၂၆၂)(ဍ) ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ ရာထူးသက်တမ်းသည် သာမန်အားဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ရာထူးသက်တမ်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေ ပုဒ်မ(၆၆)(က)(ခ) နှင့်(ဆ) ၊နှင့်တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဥပဒေပုဒ်မ(၅၁) မှာလည်း အစိုးရအဖွဲ့၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည့် သက်တမ်းများကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတိုင်းပင် ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းထားပါတယ်။
သို့ပါသောကြောင့် covid ကပ်ရောဂါကို အကြောင်းပြု၍ ပြည်သူ ပြည်သားများအား ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်ကာ အမှတ်မှားစေနိုင်မည့် စကားရပ်များအား ရှောင်ဖယ်ခြင်းဖြင့်မိမိတို့ မြန်မာပြည်ကြီးကို Covid ကပ်ရောဂါပြန့်ပွားမူ နူန်းထားများ နည်းနိုင်သမျှ နည်းပါးလာစေရန် မိမိတို့ပြည်သူ ပြည်သားအားလုံးမှ အစိုးရနှင့်အတူ covid ကပ်ရောဂါ မကူးစက်ကြရအောင် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိနေသော ညွှန်ုကြားချက်များကို လိုက်နာလျက် တက်ညီ လက်ညီ စုပေါင်းအားများဖြင့်ဝိုင်းဝန်း ကာကွယ် လိုက်ကြပါစို့ဟု နိူးဆော် တိုက်တွန်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
………. (၁၅.၉.၂၀၂၀) ……….
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာစွာဖြင့်တာဝန် ထမ်းဆောင်နေ